I-Covid lesibili – igciwane lihlasela okwesibili ngamandla | Scrolla Izindaba
I-Covid lesibili – igciwane lihlasela okwesibili ngamandla
Kutholakale uhlobo olusha lwe-Covid-19 ngabaphenyi baseNingizimu Afrika, futhi lusabalala ngokushesha, kusho uNgqongqoshe wezeMpilo uDkt uZweli Mkhize.
INingizimu Afrika isingene ngokusemthethweni kwisigaba sesibili, kumenyezele uMkhize ngesonto eledlule. Uthi kubonakala sengathi lolu hlobo olusha lushayela umjikelezo omusha wezifo.
Ekanye noProfesa uSalim Abdool Karim, uMkhize wazise abezindaba ngoLwesihlanu ngalolu hlobo olusha, olwahlonzwa ngabaphenyi bamanyuvesi KwaZulu-Natali.
Usosayensi ohlonishwayo u-Abdool Karim, ophethe iKomidi likaHulumeni eleluleka ngeNgqongqoshe (i-MAC), uxwayise wathi “asinazo izindaba ezimnandi kuwe.”
Leli gciwane “lisakazeka ngokushesha ukwedlula igagasi lokuqala,” uyasho, futhi “cishe selisabalale kakhulu eNingizimu Afrika manje”.
UMkhize ugcizelele ukuthi “asikho isizathu sokwethuka” futhi abantu kufanele baqhubeke nokuzihambela futhi bageze izandla.
INingizimu Afrika ibinbantu abayizi-892,813 abatheleke nge-Covid-19 ngoLwesine ebusuku, kanti bangaphezu kwabayi-9,000 abaqoshwe kusukela ngoLwesithathu. Sekube nabantu abayingu- abashonile sebebonke, obayi-184 bashone emahoreni angama-24 edlule.
UMengameli uCyril Ramaphosa ngesonto eledlule umemezele ukuvalwa kwamabhishi e-Eastern Cape nase-Garden Route, kanye nezimo eziphuthumayo ezise&Nelson Mandela Bay, e-Garden Route kanye nase-Sarah Baartman esifundeni sase-Eastern Cape.